Tag: fihazonana | Martech Zone
Ahoana ny fampiroboroboana ny fividianana ny varotra anao amin'ny alàlan'ny paikady fihazonana mpanjifa mahomby
Zoma 27 Novambra 2020 Zoma 27 Novambra 2020 Oliva Saikia
Raha te hivoatra sy hahomby amin'ny asa aman-draharaha, ny tompona orinasa dia tsy maintsy mandray teknika sy tetika be dia be. Ny paikady fitazonana ny mpanjifa dia manakiana satria mahomby lavitra noho ny paikady marketing hafa izany raha ny fampitomboana ny vola miditra sy ny famerenam-bola amin'ny fampiasam-bola amin'ny varotrao. Ny fahazoana mpanjifa vaovao dia mitentina dimy heny mihoatra ny fihazonana ny mpanjifa efa misy. Ny fampitomboana ny fihazonana ny mpanjifa amin'ny 5% dia afaka mampitombo tombony amin'ny 25 ka hatramin'ny 95%. Ny taham-pahombiazan'ny fivarotana amin'ny mpanjifa
Marketing amin'ny mailaka: Famakafakana fihazonana ny lisitry ny mpanjifa tsotra
Wednesday, May 27, 2020 Alakamisy, May 28, 2020 Douglas Karr
Ny olona dia manambany ny sandan'ny mpanjifa. Ity misy fihenan'ny fomba tsy handrefesana ny sandany fotsiny, fa ny fomba famakafakana ny fitazonana lisitra hahafantarana hoe aiza no ahazoana mpanjifa vaovao sy firy amin'ny famakafakana fihazonana lisitra. Ampidirina ny takelaka takelaka!
Rehefa manandrana mahazo mpanjifa vaovao aho dia mino tokoa fa ny sakana lehibe indrindra tsy maintsy resinao dia ny fitokisana. Te-hahatsapa ny mpanjifa fa toa hihaona na hihoatra ny fanantenana amin'ny vokatrao na serivisinao ianao. Amin'ny fotoan-tsarotra ara-toekarena, ity dia mety ho singa lehibe kokoa aza satria ny mpiambina dia miambina kokoa amin'ny vola tadiavin'izy ireo. Noho izany dia mety mila manitsy ny ezaka ataonao amin'ny varotra ianao
Talata, Aprily 21, 2020 Talata, Aprily 21, 2020 Rakshit Hirapara
Ny Coronavirus dia nampiakatra ny tontolon'ny orinasa ary manery ny orinasa tsirairay hijery vaovao ny teny hoe tsy fivadihana. Ny tsy fivadihan'ny mpiasa Diniho ny tsy fivadihana amin'ny fomba fijerin'ny mpiasa. Ny orinasa dia manala ny mpiasa havia sy havanana. Ny tahan'ny tsy an'asa dia mety mihoatra ny 32% noho ny Coronavirus Factor ary ny fiasana an-trano dia tsy mahazaka indostria na toerana rehetra. Ny fandroahana mpiasa dia vahaolana azo ampiharina amin'ny krizy ara-toekarena… nefa tsy mitia ny tsy fivadihana. COVID-19 dia hisy fiatraikany